ဂေါက်တံ Driver အား နတ်မောက် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ရောင်းချသူ: Nann Htet Winn
အိတ်ရှုပ်လို့ ရောင်းပါမည်. Head cover included .
There isastain on shaft.
အမည်: ဂေါက်တံ Driver
မကွေးတိုင်း , နတ်မောက်